स्वास्थ्य – दैनिक अभियान
कोरोनाको दैनिक प्रेस ब्रिफिङ नहुने
काठमाडौं, १४ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब कोभिड–१९ को दैनिक प्रेस ब्रिफिङ नगर्ने भएको छ । दसैँको समयमा केही दिन रोकिएको प्रेस ब्रिफिङ बुधबार भएको छ । बिहीबारदेखि भने दैनिक ब्रिफिङ नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब सातामा दुई दिन आइतबार र बुधबार कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ । अरु दिनको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट, भाइबर ग्रुप र सामा
खर्च व्यहोर्न नसक्ने संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू स् स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं, १४,, कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पताललाई आग्रह गरेको छ । सरकारले हालै मात्र विपन्न, असहाय, अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको चौतफी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्
बेइजिङ — चिनियाँ कम्पनीले बनाइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सुरक्षित रहेको पाइएको छ । बिहीबार द ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक रिर्पोटका अनुसार चिनियाँ सरकारद्वारा सञ्चालित सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना खोप बीबीआईबीपी–कोरभीको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको बताइएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिलाई गम्भी
प्रष्तिठानमा नाक, कान र घाँटी रोगको बिशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी
घोराही, २५ असोज । दाङको राप्ति स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च प्रबिधिको इएनटि इन्डोस्कोपी ‘फोर के’ सिष्टमको मेसिन जडान सुरु भएको छ । मेसिन जडान भएर सेवा सञ्चालनमा आएमा जटिल खालको नाक, कान र घाँटी रोगका उपचार प्रतिष्ठानमा हुने नाक, कान, घाटी रोग विशेषज्ञ डा.बिक्रम बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनले यो मेसिन जडान भएमा प्रतिष्ठानले दशैतिहारपछि सेवा सुरु गर्ने बताए । उनले मेसिनसंगै जनशक्ति ब्यबस्था
काठमाडौँ । स्तन क्यान्सर लागेकाले आफ्नो हौसलाले क्यान्सरलाई पराजित गरेको अनुभव सुनाएका छन्। नेपाल क्यान्सर सरभाइबर्स सोसाइटीले क्यान्सर विरुद्ध सचेतना अभियान क्रममा आज यहाँ आयोजना गरेको वेभ कार्यक्रमका सहभागिले सफल उपचार र मनोबलले क्यान्सरलाई पराजित गर्ने जनाएका थिए । अक्टोबर महिनालाई विश्वभर नै “क्यान्सरको समयमै उपचार गर्ने हो भने निको हुन्छ” भन्ने नाराका साथ स्तन क्यान्सर विरुद्धको अभियान सञ
काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सरको उपचारका लागि स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन र सेवामा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा बिरामीहरु उपचारका लागि विदेश जाने गर्दछन् । विदेशिने रकम रोक्न र सस्तोमा सहज उपचारका लागि सेवा विशिष्टीकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा निर्मल लामिछाने क्यान्सरका सबैजसो साधारण उपचार यह
गोल्टाकुरी स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिने बढे
दिप्तीशिखा चौधरी दंगीशरण, ३० भदौँ । दंगीशरण गाउँपालीकाको वडा न. २ गोलटाकुरीमा रहेको गोलटाकुरी स्वास्थ्य चौकिमा स्वास्थ्य चेकजाचँ गराउँन आउँने नयाँ सेवाग्राहिहरुको संख्या बृद्धि भएको छ । गत साल २०७५/०७६ मा आर्थीक बर्ष २०७६/७७ मा २२.८९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत बर्ष स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाचँ गराउने नँया बिरामीको संख्या तीन हजार २ सय ९७ रहेको थियो भने यस बर्ष बढेर ४ हजार ५२ जना रहेको स्वास्थ
काठमाडौं ,२९ भदौ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनशन सुरु गरेका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको अनलाइनखबरलाई बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग रा
भाँचिएको लिंगको सफल अप्रेसन
तुलसीपुर, २९ भदौ । तुलसीपुरको सीटी हस्पिटलमा जटिल प्रकृतिको अप्रेसन सफलतापुर्बक सम्पन्न भएको छ । आईतबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ निवासी २६ वर्षीय एकजना युवकको लिंग भाचिएपछि उनलाई तत्काल हस्पिटल पु¥याईएको थियो । यौन सम्पर्क गर्नेक्रममा उनको लिंग भाचिएको थियो । समयमै हस्पिटल पु¥याएपछि चारघण्टा लामो अप्रेसन पछि उनको लिंग जोडिएको हो । सर्जन डाक्टर सुशिल खनिया, एनेस्थेसिस्ट डाक्टर रुपेस म
काठमाडौं, २२ भदौ । निजी प्रयोगशालामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण गराउनेलाई बीमा भुक्तानी नदिने निर्णयबाट बीमा समिति पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै बीमा समितिले निजी परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, समितिले नक्कली रिर्पोट ल्याउने एक जना व्यक्ति पनि देखाउन सकेन भने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढ